Ukumkanikazi Ubutyebi | Coinfalls Casino
Ukumkanikazi Ubutyebi ngumdlalo slot okuqaqambileyo ukuba usilungiselela 117,649 Megaways ukuphumelela. olwaKhiweyo phezu 6 x 7 bayotywe igridi, oku Big Time udlala lwenjini ubuhle iza adakasa bayotywe epheleleyo kunye inomsebenzisi Reel KloneName. Ezi imizobo cut ecacileyo kwaye ummi yasebukhosini kubo imiqondiso Likhonkco efakwe i-kunxitywa i bhobhile.
Big Time midlalo na abatsha kwishishini midlalo yekhasino intanethi kwaye likhuphe ezilishumi imidlalo slot kude kube ngoku kwakunye BlackJack online kwaye Blackjack. Izinze Australia, Sydney, abanayo abathengi ngohlobo zehlabathi zokungcakaza edumileyo ekusasazweni kwihlabathi liphela. imidlalo zabo ezifumaneka ngeelwimi ezingaphezu kwama-amabini ezithethwa kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi.
Ukumkanikazi Ubutyebi na nomkhoko kakhulu ekhangela umdlalo slot olubangelwa isakhiwo bayotywe eyodwa. Ibe 6 macwecwe kunye 7 imiqondiso owayehleli ngasinye kuyo. Ezi mpawu ziquka Iliso uHorus, bulongo, Ra sase kunye iKumkanikazi ngokwakhe lowo usebenza zasendle. yonke lujongo nokuva kwazo umdlalo i'St yaye sisalathisi yonke obutofotofo. The mesmerizing Queen velisa i lingabali 7x naziphi kwibhola emdlalweni isiseko kwaye ngokukhawuleza endaweni zonke iisimboli kwindawo bayotywe ukwenza bayotywe zasendle ngokupheleleyo. Ngoko ukuba wenze indibaniselwano esiphumelelayo kusetyenziswa 2 namacwecwe zasendle, ufumana eyinzwana 49x lingabali. The pyramid symbol is the only symbol that pays even if you land two of them on the adjacent reels. Kukho nezinye ezilithoba imiqondiso ngaphandle zasendle yaye kuquka neempawu ikhadi ukudlala ezintandathu. Iintlawulo zekhefu zabo zitshekishwe ngokunqakraza paytable iqhosha.
Bayotywe clone osemqoka lwenzeka ngokungakhethiyo na spin. Apha i bhobhile phinda imveliso ukuya namacwecwe ezintandathu twatse. Ngaphezu koko, i bhobhile zasendle ngokupheleleyo nazo phinda ukuvelisa ukuya 5 iiseti namacwecwe ezipheleleyo zasendle kunye lingabali random inqamla emalifakwe kubo.
Megaways ikubonelela 117,649 iindlela zokwenza lwendibaniso ngokuphumelela. Oku kunokwenzeka kuphela ngenxa bayotywe ebanzi isakhiwo i.e 6 namacwecwe kunye 7 iisimboli yegrid.
Ukumkanikazi Ubutyebi umntu Return intle ophucukileyo Umdlali ipesenti 96.9. Ubhejo ubuncinane kusetyenziswa ukudlala ngayo 0.20 kwaye ubuninzi na £40.
Ukumkanikazi Ubutyebi le ujonge slot umYiputa-themed kulungile ukuba uthembisa Umbambisi abazilungeleyo ukuba umdlali. Zasendle bayotywe apheleleyo kunye neempawu Reel clone mahle umxhelo kwaye unayo yokuzonwabisa ngokucokisekileyo uyidlale.